I-12 Tricks yoLawulo lweeNkonzo ezininzi zeeNkcukacha zeNgugu IYO
I-12 Tricks ukuLawula iiNkonzo ezininzi zeNgu
Ukulawula iiNkonzo ezininzi zefu - DevOps
Akukho mthengisi wefu elilodwa unempendulo efanelekileyo ngenye yeemeko zoshishino. Indlela eyona ndlela yokunyusa iindleko zokulawulwa kwefu kwi shishini lakho kukulawula abaphakeli abancinci bamafu kunye nokuhlola nganye yazo zonke ixeshana. Yiloo nto enokuthiwa kuthiwa uhlabelela i-aria ngelixa uhlala ekhanda lakho kunye nokuqanda amaqanda. (Akunalo naluphi na uluhlu lweengcamango, nangona kunjalo lungavela ngaloo ndlela.)
Nazi izinto ze-12 eziza kukukhunjulwa xa uhlela inkqubo yenkqubo yefayili yakho:
Inkcazo yenkqubo yonke, kwaye emva koko kukwahlula apho ifu ifanele khona kuyo:Fumana isithombe esifanelekileyo senxalenye yefom kwinkqubo yolawulo lwenkqubo jikelele yokuphepha ukuba ungene kwiimfuno kwiinkcukacha zabaphathi bezomphathi kunye nabathengi abahlukeneyo. Imizila eyahlukeneyo yezoshishino iya kulungiswa ngokugqithisileyo ngababoneleli beefrifu ezahlukeneyo.
Sebenza nabathengisi abasabela ngokukhawuleza kwaye baxhomekeke kwizinto ezingalindelekanga. Kukho kuya kuxhomekeka ukuba ziimeko ezingalindelekanga xa udibanisa kunye nokulawulwa kwamafu amaninzi. Iincwadana zakho kufuneka zixele ngokuqhelekileyo ngemeko yolawulo lwazo, ukuphuculwa, kunye nezinto ezintsha.
Ukuchonga amazinga okugcina nokuxhasa iinkqubo ezantsi. Iingcaciso ezibini ezibalulekileyo emva kokuvuma ukulawula ifu zindleko zemali kunye nemisebenzi engakumbi. Enye indlela yokufezekisa zombini kukunciphisa umlinganiselo wokubaluleka komntu okufuneka ugcine izikhokelo zakho zikhonona.
Ubume obuninzi obuninzi bokulawulwa kwamafu ahlukeneyo kubonakala kulo mgca wemibala equka izixhobo ezininzi ezimele zidibene kunye. Inani elithile lala mazinga aphantsi aphantsi kufuneka lenziwe ngendlela yokuphucula inkqubo yakho. Umthombo: UCarl P. Lehrmann, uPhando lwe-451
thabatha emva bakho bathengi. Nika ingqwalasela ngokucokisekileyo ukuba "abathengi" bezicelo zakho kunye nezikhokelo zibeka njani izixhobo zokusebenza. Ziyizona zikhokelo ezifanelekileyo kakhulu zeziphi iinkqubo ezikhuselekileyo ezikhuselekileyo. Ungakwazi nokufumanisa malunga naluphina ulawulo olutsha abathengi bafumana ukuba bancedise ukugqiba umsebenzi wabo ngokugqithiseleyo, ngokubanzi nangakumbi nangaphantsi kancinci. Oku kukunika ithuba lokufumana i-hop kwiintlobo zezixhobo abathengi banqwenela ukuba bafune emva koko.
I-Doublefold phantsi kweendlela zokulawula iindleko. Awukwazi ukulawula into ongenakuyibona. Ukulawula abahwebi abaninzi badibanisa inkqubo yokuyalela ukulawula okutsha. Ukuhlaziya izithintelo ezingenakuqhelana nokukhawuleza ukuphunyezwa kwemibutho emitsha encedisayo, cwangcisa inkqubo yokuthenga efana nezilungiso ngokwazo. Nangona kunjalo, kungekudala emva kolawulo olukhethekileyo ubusuku bokuqala, uvavanye ukuba ngaba ulawulo olutsha luya kulungiswa nokuba kungakhathaliseki iindleko nokuba ingaba zingcono nazikhetho ezincinci.
Umjikelo wokuphila wesicelo uqhubeka uqondisa ukuhamba kwefu. Iifama zeseva zinokuyifumana, nangona ngokuqinisekileyo azipheli. Ngenxa yezizathu ezichongiweyo zokhuseleko, ukuzinza, ukukhuselwa kunye naliphi na inani leenguqu ehlukeneyo, izikhokelo ezimbalwa zihlala endlwini iminyaka ezayo. Ngokuqinisekileyo kufuneka ubaleke ukuzama ukuphakamisa nokuhambisa isicelo sendawo ngaphakathi kwintlawulo yefu, ngokukodwa eneminyaka emibini okanye emithathu ubudala kwaye ngale ndlela ayizange ihlawule yona. Emva kokuba isakhelo esisisiseko silungiselelwe ukuhlaziywa kwakhona, akukho nto ifuna ukubeka ukhuseleko loshishino lokuya kwefu-yangaphakathi.
Ukuxhaphaza amandla pre-emptable o matshini. Ekubeni baqhubeka bengaphantsi kwangexesha lee-24 ii-VMs zangaphambili ezingenakuphululekayo zigqibo ezifanelekileyo zokubamba nokugxeka amalungiselelo okunyamezela, njengendlela ye-ComputerWeekly kaMatekisi Cooter kwinqaku likaNovemba 2016. Ii-VM ezingenakwenzekayo zininzi kunye neepesenti ze-80 ezingabizi ngaphantsi kweempawu eziqhelekileyo ze-Google, kunye nemibutho yabo yokuncedisa ixabiso lilungiselele kwaye lijongane neendleko zabo.
Ukwamkela isakhelo solawulo lwefama sekhompyutheni eselungelelanisiweyo esenzelwe iimeko ezintle. Le yindlela efanelekileyo yokuqinisekisa umncedisi wakho, ukugcina impahla, ukulungiselela, ukhuseleko, imisebenzi kunye namaqela ezicelo abenza njengeyunithi yodwa ekujoliswe kuyo kwiinjongo ezabelwana ngazo, njengoko kuboniswe nguYay Litkey, umongameli kunye nomsunguli we-cloud organizationist Embotics, ngoNovemba 21, I-2016, inqaku kwi-Virtual Strategic magazine. Naluphi na umbutho ohleliweyo malunga nomda wesiseko womzimba uya kulwa ne-move to cross and cloud-situations.
Ukwahlula izicelo kwiqela lakho are ezifanelekileyo ukusetyenziswa kwefu-ukusetyenziswa kwendawo. Izicelo eziqhelekileyo zizinzile, ziqhubeka ziqhuba njenge-VMs, zisebenzisa ubunjineli be-scale-up kunye kwaye zininzi kunzima ukudala, ukuthumela nokuqhubeka. Ngokwahlukana, izicelo zelifu-zendawo ziye zahlula kunye nokulawulwa kwendawo, kuqukwa ukuhlanganiswa kwamacandelo kunye nokulawula, ngokubhekiselele kwindlela yokukrabalaza, kunye nokulula ukwenza i-robotize, ukuhamba kunye nokulinganisa.
Gxininisa kwizicelo kumbutho wakho oza kuncedisa kakhulu ukusuka kwindlela yendawo yelifa, kwaye uhambe kuzo ezo zilungiswa ngokufanelekileyo kwinkqubo yeseshishini yeseshya yesintu. Umthombo: TechTarget
Ukulungelelanisa izicelo zakho kumlawuli odlala kwiimpawu zawo. Ulawulo lwegama elikhulu, umzekelo, i-VMware kunye ne-AWS ziye zaxhamla ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabaxhasi babo. Umzekelo, i-VMware's vSphere-based Based Hybrid Cloud ilindelekile kwizicelo zesintu, kunye neNdawo yamaHlathi eHlbrid ejongene nenkqubo ejoliswe kumanqwanqwa ayenziweyo, okusekelwe kwi-microservice-based. Eyona nto, i-AWS's Elastic Compute Cloud, i-Block Store Block, uxwebhu lwe-EFS kunye ne-VPC iiprogram zangasese kwiifama ze-server zangasese, ngelixa umbutho ukongeza ukongezwa kwemali ephakamileyo, umzekelo, i-NoSQL yolwazi, ukuphathwa kwe-BI, i-Hadoop-like bunches, umyalezo imigca, chukumisa ukulawulwa kwesaziso, ii-transcoders media kunye ne-index indexes.
Isilungiselelo se-robhotize siphezulu kwiimeko zefu. Indlela efanelekileyo yokunxibelelana nokusetyenziswa kwamandla amaninzi amafu kukuba kubekho umgangatho wodwa owenzelwe amalungiselelo axhunyiwe ngenxa yendalo yonke. Iindlela ezifihla uluhlu olunjengamaseva asebenzayo, imithwalo yomsebenzi, ukugcinwa kolwazi, ukuhamba kwemisebenzi, ukuhlala / ukulawula, ukubika nokukhuseleko. Kwakunjalo ngokuncinci ukufaka izicelo zokuphuculwa kunye neenguqu xa unelungelo lokuzimela ngokuzikhethela kwiikhokelo ezahlukeneyo ngokubhekiselele ekubeni i-progression ibangela ukungatshatyalaliswa kwindalo nokusingqongileyo.
Umthengisi okhuselekileyo uphenduka ube yimpahla yexesha elidlulileyo. Xa uxhomekeke ngokupheleleyo kwifowuni enye evulekileyo, kunokuba nzima ukufudula uomatshini obuqinileyo kunye neempahla ezahlukileyo kwelinye ulawulo. Phakathi kwamacandelo okuqwalaselayo afana nemimiselo efana nayo / yokubhala, iimfuno zokutshintshaniswa ngolwazi kunye nokungenwa kwenkqubo. Ngokuxhomekeka kunokuba udibaniso lwesiko lolawulo lwefu, zonke izicwangciso zesabelo kunye nokuyila, uqhubezela ukujongana notshintsho kunokuba utshintsho lube lusebe.
Ukulawula ifu kunye ne-Chef Automate kunye ne-AWS